လမ်းဆုံ .....: စာအုပ်များ ဒါနပြုပါသည်
Download ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ
ကိုတာ လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်း
ကိုဘတင် နက္ခတ္တ ဒီပနီကျမ်း
ကင်းဝန်မင်းကြီး နေမိ ရကန်
ခင်ဆွေဦး စစ်ကိုင်းသမီး ဒိုင်ယာရီ
ချစ်နိုင် အနှစ် ၃၀
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး သွေး
ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် သူ
ငွေကြည် ကြွကြွရွရွ ဟာသ
ငွေကြည် တိုတိုထွာထွာ ဟာသ
ငွေကြည် ပြည့်ပြည့်၀၀ ဟာသ
ဆန်းလွင် ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,၁၉၉၉ ဇန္န၀ါရီ
ဆန်းလွင် ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒ နှင့်လူသားပဓါန၀ါဒ
ဆန်းလွင် ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လူသူ တစ်ယောက်အကြောင်း
ဆွေမင်း. ဓနုဖြူ ဘ၀တစ်ခုအမှတ်ရ
ဇ၀န ဆိုးပေ ၁ , မယာမီဒီယာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၀ မေလ
ဇ၀န ဆိုးပေ ၂
ဇ၀န ဆိုးပေ ၃
ဇေယျ ဇေယျ စာတန်း , ညွှန့်ဋ္ဌေးစာပေတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၅
ဇော်ဂျီ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ
ဇင်သန့် စာဖတ်ခြင်း ၁
ဇင်သန့် စာဖတ်ခြင်း ၂
ဇင်သန့် စာဖတ်ခြင်း ၃
တင်မောင် တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် တော်ကူးဆရာတော် ဘ၀ဆည်းဆာနှင့် ကျင့်စဉ်တရား
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် ဘ၀ဖန်တီးရှင် ကံတရား
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ဒုတိယတွဲ
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန် ၂၀၀၇
ဗားကရာဆရာတော် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ ပါဌ်နိဿယ
ဘလော်ဂါနှင့် ကဗျာဆရာ/မများ ကောင်းကင်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဘဒ္ဒန္တကိတ္တိသာရ ဗုဒ္ဓညွှန်ကြား မသေဆေးတရား
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ နာဂလိုဏ်ဂူ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် လယ်တီဝိပဿနာ
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၃
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၄
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၅
မေငြိမ်း သတင်းသမားသတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့်စကားသံများ
မိုးကုတ်ဆရာတော် သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့
မိုးကုတ်ဆရာတော် သစ္စာ ၄ ပါးတရားတော်
မိုးကုတ်ဆရာတော် ဇော ၇ ကြိမ်အကျိုးပေးပုံ.ကပ်ကျော်တရားတော်
မင်းမြတ်သူရ ရွှေချမ်းသာ ငွေချမ်းသာ
မင်းလူ ချစ်မြားရှင်အစ ချစ်မြားရှင်အဆုံး
မင်းသိင်္ခ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ပျားစွဲသောမုတ်ဆိတ်
မင်းသိင်္ခ ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၁
မင်းသိင်္ခ ပုဏ္ဏားဘကွန်း ၂
မင်းသိင်္ခ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၁
မင်းသိင်္ခ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၂
မင်းသိင်္ခ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၁
မင်းသိင်္ခ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၂
မင်းသိင်္ခ မြေလျှောက်ဝိဇ္ဖာရွှေမြသာ ၃
မောင်ထင် ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း
မောင်ဘိုသစ် ကဗျာရေးနည်း နိသျည်း
မောင်သာရ ကျဉ်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့
မျိုးသူရ နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်. Everyday Internet
မြသန်းတင့် နှစ် ၁၀၀ ကမ္ဘာ့စုံထောက်ဝတ္ထုတိုများ၂
မြတ်သူ ကိုရမ်အဘိဓါန် ၁
မြတ်သူ ကိုရမ်အဘိဓါန် ၂
မြန်မာသမားတော်ကြီးများ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ရဲကောင်းထက် ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူများ
ရန်အောင်မောင်မောင် ထောင်တစ်သက်အတွေ့အကြုံ ,သီရိမေရောင်စုံပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၀၀၄ ဧပြီ
ရွှေဘို မိမိကြီး အနာဂါရိကဓမ္မပါလ
ရွှေဥဒေါင်း + ၅ စာရေးဆရာတို့၏ ပထမဆုံးလက်ရာမွန်များ
လှပိုင် မဟာသကျသီဟဘုရားသမိုင်း , ၆.၂.၁၉၆၄
လယ်တီဆရာတော် နိုင်ငံခြားပုစ္ဆာ အဖြေပေါင်းချုပ်
လယ်တီဆရာတော် လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၃ ကျမ်းတွဲ
လယ်တီဆရာတော် အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း သံပေါက်လင်္ကာ
၀င်းတင့်ထွန်း ခြောက်တိုက်မှာ လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင်ဝတ္တုတိုများ
၀င်းဦး မိန်းမလှ အမုန်း
သတိုးတေဇ သုဿန်မြေက မိစ္ဆာ
သပြေကန်ဆရာတော် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တရားတော်များ
သပြေကန်ဆရာတော် သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁
သပြေကန်ဆရာတော် သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ်၂
သာဓိန ဗေဒနီတိကျမ်း , မဟိန္ဒစာပုံနှိပ်တိုက် , ၁၉၃၀
သုမောင် မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ
သင်္ဃဇာဆရာတော် ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်, ၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆိုလ
သန်းမြင့်ဦး အချစ်ဘ၀နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ
သိပ္ပံမောင်ဝ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း
အကြည်တော် ဆွေတစ်ရာ မောင်တစ်ကျိပ်
အကြည်တော် အချစ်သည် သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေသတည်း
အရှင်ဃောသိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်ဘ၀သာသနာ
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ သိပ္ပံအမြင်နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအမေးအဖြေများ
အရှင်ရဋ္ဌသာရ _ ဂမ္ဘီသာရပျို့စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်, ၁၂၈၉ ခုနှစ်
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း , ပြည်ကြီးမန်တိုင်စာပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန်
အရှင်အဂ္ဂသမာဓိ _ နေမိမ္ဃစိုးခဏ်းပျို့ , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက်,ရန်ကုန်,၁၉၀၀ခုနှစ်
အောင်သင်း _ မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္ဓ၀င်မိတ်ဆက်, Future Publishing House , ရန်ကုန်, ၂၀၀၂ စက်တင်ဘာ
အုတ်ဘိုဆရာတော် _ စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက် ,ရန်ကုန်မြို့
ဦးကံညွှန့် _ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊တရား၊အနှစ်သာရနှင့်ရှုပွါးနည်း
ဦးစန်းမောင် _ ရခိုင်မင်းသား , သံတော်ဆင့် ,၁၉၄၆
ဦးပုည _ မန္တေလေးဘွဲ့ မော်ကွန်း
ဦးဘကြည် _ ဇာတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်မြို. , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန်လ
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ
ဦးဣန္ဒောဘာသ ၀ါကျသွားအချိုးအဖြေကျမ်း+၆စောင်တွဲ, ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်ပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် ၁၂၉၀ကဆုန်လ
Dhamma Dhuta Dr Ashin Pannissara _ How to Practice Meditation
Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creator
Dr Mehm Tin Mon _ The Right View on Life, Living and Dying
Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhism
Mogok Sayadaw _ Basic Paticcasamuppada
Mogok Sayadaw _ Ehi Passiko
Mogok Sayadaw _ How To Die With A Smile
Mogok Sayadaw _ Meditation on Mind and Feeling
Mogok Sayadaw _ The Four Noble Truths
Penang Sayadaw _ Dawn of Buddhism
Richard Walton _ Advanced English C.A.E
Various Authors _ Buddhism Handbook
U Dhammapiya _ Nibbana in Theravada Perspective
U Revata _ A Life of True Security
U Than Daing _ Cittanupassana and Vedananupassana
Anandajoti Bhikkhu, ABHIDHAMMA-MATIKA, 2007
Bertrand Russell, ABC of Relativity, London
Bertrand Russell, The History of Western Philosophy, N.Y, 1954
Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian , 1927
Dr Walpola Rahula, WHAT THE BUDDHA TAUGHT
Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf & New York , 1883
Harun Yahya, ISLAM and BUDDHISM , NEW DELHI, 2003
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA -acomparative study, POONA,1937
Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 1950
A Critical Analysis of The Jhanas
A Four Stanza Poem on Samvega
A Guide to Proper Buddhist Funeral
A Manual For Buddhism On Deep Ecology
A Manual of Respiration
A Manual of the Path Factors